Nahoana ianao no te-hanandrana sy hivarotra fampianarana an-tserasera amin’ny lohahevitra tsy fantatra?
Fantatrao fa zavatra tsy dia malaza loatra no hijerena ny sainan’ny mpihaino anao, indrindra raha mitaky ny hahatonga anao ho liana aloha, satria ny mpamaky anao sy ny mpizara dia mety tsy mahafantatra akory fa misy ny soso-kevitrao!
Izany dia satria rehefa mamoaka ny hafatrao ianao dia tsy mila vola fotsiny – te hitondra zava-baovao amin’ny nich ianao, avelao ny rivotra iainana vaovao, hahazo hevitra vaovao mivezivezy.
Ary tena tsara izany! Mety toerana fivarotanao tokana, USP iray tokana mety hanova anao ho ilay nanoratra ilay boky, no beyogyy … no fampianarana an-tserasera.
Mila asa bebe kokoa izany, satria sarotra ny mandresy lahatra ny olona hanaraka na inona na inona amin’ny lohahevitra iray izay tsy fantatra na tsy dia kely noho ny malaza, avelao izy hividy.
Saingy ho gaga ianao raha hianatra hoe fomba firy no hahazoana vola amin’ny fampianarana an-tserasera toy havey!
Misy ny paikady izay narahiko ary arahiko koa ary olona hafa koa no nanaraka. Amin’ity lahatsoratra ity, hitari-dalana anao aho avy eo mahaliana ao amin’ny lohahevitra tsy dia malaza na ny nich, to manao vola ary mamokatra fifamoivoizana miaraka amin’ny lalanao an-tserasera.
0.1 Famintinana an’ity toro-lalana ity (rohy haingana):
2 2. Miteraha fahalianana amin’ny Surveys sy Poll
3 3. Ampandrosoy ny e-Course eo amin’ny sehatr’ao
3.1 5. Els cursos efa misy
4.1 1. Entrevistes
4.2 2. Publicacions de convidats
5 6. Amidio ny fianarana manokana amin’ny vidiny ambany kokoa noho ny fandaharam-potoana ara-dalàna na ny vokatra hafa
8 Caixa d’eines Ny a l’interior d’Internet
8.2 2. Manome azy io ho an’ny Free / Pagat na hamono azy io
8.3 3. Transmissió en directe de Ampiasao
10 Per resumir-ho
Famintinana an’ity toro-lalana ity (rohy haingana):
Ny zava-misy dia hoe afaka mivarotra kongilika an-tserasera amin’ny lohahevitra iray tsy fanta-piavina ho an’ny mpihaino izay efa mahafantatra sy matoky azy ianao ianao!
Mila haviay fitokisana izany ianao hanomboka ity ezaka vaovao ity. Raha tsy misy eray drafitra izany, no es rehetra diay mety hiteraka fihenanam-potoana, vola ary loharanon-kery, na dia manolo-tena hisoratra anarana aza ianao.
Ny dingana voalohany hivarotana ny aterineto manokana dia ny manomboka amin’ny olona mahafantatra sy matoky anao – ireo mpanjifanao, mpibilaogy mpamaky bilaogy, ireo mpanara-dia ara-tsosialy, sy mpianatra ankehitriny (raha tohahaaaahaaaaaaaa.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fomba handehanana amin’izany:
Ny mpamaky bilaogy dia mety hanome valinteny tsara ho an’ireo lahatsoratra bilaogy fampidirana.
Atombohy amin’ny lahatsoratra am-barotra indrindra anao ary ampio andalana miaraka amin’ny CTA momba ny hevitrao vaovao, tariho azy ireo ao amin’ny takelaka iray izay hanazava amin’ny an-tsipiriany ny hevitrao ary ny no, hafa.
Azonao atao mihitsy aza ny manamboatra sary na boky kely ary manolotra izany amin’ny pejy fandrahonana.
Azonao atao koa ny manoratra lahatsoratra bilaogy vaovao mampidirana ilay hevitra amin’ny vao vao, mampifandray azy amin’ny pejy mitongilana izay hanazavanao izay tianao hampianaranao ny mpamaky momba izany, ary ampraamyamamamamam.
Ohatra, manana bilaogy momba ny SEO, màrqueting ary freelance Escriure aho, ka afaka ‘mampifandray’ ireo lohahevitra ireo amin’ny famahanana bilaogy toetra (nich nicely fantasiosamente). No tiako ataque dia mity ireo olona efa liana amin’ny famahanana bilaogy, SEO, màrqueting ary fanoratana mba hahalasa saina no momba ni famoronana bilaogy.
Ireo rehetra izay miasa ho an’ny mpamaky dia manjary malaza ho an’ny mpamaky azy, satria izy ireo no loharano mendri-piderana, ireo olona izay liana indrindra amin’ny votoatinao, mihoatra noho ny mpamaky tonga sy requireha.
Azonao atao ny mampahafantatra azy ireo amin’ny alàlan’ny mailaka kely fantatrao miaraka amin’ny "PS" qualsevol amin’ny faran’ny mailakao vaovao, na azonao atao ny mampahafantatra azy ireo amin’ilay lohahevitra miaraka andiam-pandefasana mailaka, amin’ny faran’ny hanaovanao hevitra, joguina izany jy jy ny hoe: "Te hanao sonia ve ianao amin’ny alohan’ny vorona eo amin’ny (Nom del tema)?"
En ser indrindra no nataoko tamin’ny lisitry ni buscaogiko.
Manaraka anao ry zareo noho ny vaovao sy ny votoatiny, fa liana amin’ny hevitrao izy ireo, noho izany dia azonao atao tokoa ny mangataka fanehoan-kevitra amin’ny lahatsoratra vaovao na fivoriana mivantana mivantana izay hafaifamana.
Anontanio azy ireo momba ny fahalianan’izy ireo amin’ny nosy tsy tianao: sariaka ve izy ireo? Tiany he votoaty maimaim-poana momba izany? Ahoana raha manolotra s’adapta a maimaim-poana momba ny lalanao an-tserasera ianao mba hianatra bebe kokoa?
Afaka mamorona Q&A ianao ary hahita hoe inona no fandraisan’andraikitra azonao.
Ny mpianatrao dia efa mahafantatra ny hasarobidinao sy ny fahaizanao mampianatra, mba hahafahan’izy ireo ho liana amin’ny hevitrao voalohany amin’ny dingana vaovao.
Ampio fehintsoratra iray na roa momba izany ao amin’ny gazetiboky ny dingana efa misy anao, na manome lesona fanampiny ho an’ny mpianatra izay hampidiranao no lohahevitra si no fampiharana sasantsasany.
Asongadino ny fifandraisana misy eo amin’ny lalana misy anao, heyitra vaovao ary ny modules fianarana tianao hanorenana izany.
2. Miteraha fahalianana amin’ny Surveys sy Poll
Asao ny sokajy tsirairay ahitana mpampiasa azo itokisana hita amin’ny teboka teo aloha mba handray anjara amin’ny fanadihadiana momba ny dingana vaovao.
Ny votoatiny azo atao tsara kokoa mba hahazoana valiny avy amin’ny mpitsidika habaka.
Mbola tsy fantatry ny mpihaino kendrena anao na ho liana amin’ny zavatra atolotry ny làlanao fotsiny izy ireo, na raha toa ilay lohahevitra manjavozavo izay tsy fahita firy momba ny bilaogy anananao dia sarobidy ny fotoana syya.
Mila mamantatra ny fahalianany ianao amin’ny fanadihadiana fohy sy tsy misy fika ary votoatin’ny vahaolana tsotra izay mifandray amin’ny votoatin-kevitra fampidirinao efa ao amin’ny tranokalanao, ary mety ho efa novakianao taloha.
Azonao atao ihany koa ny manao fanadihadiana ampahibemaso na fandatsaham-bidy ho valin’ny lahatsary iray momba ny fampidiranao no lohahevitra, mba hahafahanao maniry hanampy amin’ny alàlan’ny fanovozan-damba.
Hanaraka ahy ve ianao amin’ity tetikasa vaovao ity?
Ahoana no tianao hianarana bebe kokoa momba ity lohahevitra / fomba fanao / hevitra ity?
Te hiditra amin’ny fampianarana rehetra izay mampianatra anao ny fomba hampiharana azy io ve ianao?
Raha afaka mamorona tetikasa manodidina és hevitra ity ianao, inona no mety ho izy? (Ity fanontaniana ity dia manampy amin’ny fandraisana anjara amin’ny fampiasana azo atao)
Ho vòc-vif-pifidianana, soca amin’ny:
1. Mamoròna lahatsary iray na manorata andininy fohy manazava fohifohy ny hevitrao, ary manontania fanontaniana momba izany. Ny fanontaniana dia tokony hanaraka mivantana avy amin’ny lahatsary na lahatsoratra ary mamorona fifanakalozan-dresaka voalohany amin’ny mpitsidika.
Ohatra: Widget Manana a lapan’ny s’adapta al japonès-kevi-pifandraisana a l’amin’ny tranokalan’ny bilaogera toetrako (jereo ny sary etsy ambony) manontany ireo mpitsidika hoe "Inona no és fanontaniana, no es pot interpretar al personatge del bloc? Avelao hazavaiko no fisalasalanao ”. Ity fanontaniana tsotra ity dia manampy ahy hahazo valiny mahasoa ary mampiditra ireo mpitsidika tafiditra amin’ity vazaha fanta-daza ity.
2. Ataovy izay hahamora ny fananganana no fitangatsanganana, satria tianao ny hilaza aminao ny tena tian’ireo olona ho fantatra momba ity lohahevitra ity sy ny olana atrehiny, ny fisalasalany, ary ny fiheverany diso momba Izany.
3. Ampandrosoy ny e-Course eo amin’ny sehatr’ao
Ny fikolokoloana dia tokony hokarakaraina am-pitandremana satria mampivoatra ny lohahevitra ianao na lohahevitra iray mety tsy haneno lakolosy eo noho eo amin’ny mpihaino anao, noho izany dia mila mametraka ny fototr’io fahalalana io ianao.
Ary tsy maintsy manao izany ianao na amin’ny votoatin’ny fampiroboroboana sy ny pejy fandrahonana.
5. Els cursos efa misy
Mamorona lesona iray na roa handrakonana lohahevitra fampidirana ho an’ny taranja vaovao. Azonao atao ny manampy ireo lahateny ireo ho toy ny modely fanampiny amin’ny fampianaranao amin’izao fotoana izao, na hanoratra anarana ireo mpianatrao ho anao amin’ny alàlan’ny mini-fampidirana ho toy ny mpihaza ilay hitranga.
Ny fantsomanao misy anao dia fanombohana ny ezaka fampiroboroboana anao.
Tsy maintsy mivoatra ianao raha te hanatratra mpihaino marobe, mahazo misoratra anarana ary mivarotra enmig de bebe kokoa. Mila vongana ianao!
Ny vaovao mahafaly dia rehefa nanao asa tsara ianao tamin’ny fantsona efa misy, dia manangana manampahefana ianao, izay hanampy anao hanana safidy hafa mora kokoa.
Azonao no va poder fer cap mena de fanampian’ny HARO, SourceBottle i MyBlogU. Azonao ampiasaina maimaim-poana ireo sehatra ireo.
Mamaly ny fanontanian’ny media momba ny lohahevitra sasany mifandraika amin’izany ary ampiasao ny fotoana hampidirana ilay hevitra vaovao. Ohatra, raha mitady hevitra momba ny famahanam-bolongana ny mpitoraka bilaogy iray, azoko atao ny milaza azy ireo momba ny tetikasan’ny bilaogin-draharaham-barotra amin’ny endriko sy ny làlana ataoko hampianarana ny hafa ny fomola.
Tsy misy antoka tsy hampiasa ny hevitrao fa milia andramana foana!
2. Publicacions de convidats
Ny fandrakofana no bolongana tratran’ny trafika dia mety hahaliana olona brown kokoa na farafaharatsiny mahaliana ny momba ny lalanao.
Mitadiava arruïna qualsevol nínxol de l’anatisme esay mifandray akaiky amin’ny anao na farafaharatsiny ao amin’ny nicheo ao amin’ny blôginao, ary ampiasao ny hery mandresy lahatra amin’ny mailaka fanaraha-maso hametraka azy ireo lahatsorara creatogy mommabavitra.
Zava-dehibe fanyana votoaty na lesona roa farafahakeliny na lesona maimaim-poana ho santionany ho an’ireo mpamaky bilaogy hakingana no hevitra momba ny atiny.
Raha toa ka misy backlinks any amin’ny blôginao na ny pejy momba ny egokitzenangatsanganana dia mety ho tafiditra ao anatin’ny sehatry ny bio, azonao atao ny mamorona fanentanana ao amin’ny lahatsoratra ary mampifandray ny fanentanana amin’ny ana.
Ny bilaogy sasany dia mamela hafatra fampahafantarana raha ilaina amin’ny resaka. Azonao ampiasaina ihany koa ny vondrom-piarahamonina mifototra amin’ny votoaty toy ny Linkedin Pulse, Kingged and Middle amin’ny Twitter.
Ireo dia toerana nahitana trangan-javatra goavana izay mety hahitana maso ny lahatsoratr’izy ireo, indrindra fa raha toa ka misy tambajotra nasionalin’ny varotra an-tserasera na no fomba fiainan’ny aterineto.
Ny fahombiazana dia zava-dehibe ny fandraisana anjara marina amin’ny tetikasanao manokana, araka ny nolazain’i Melody Pourmoradi:
Mino tokoa aho fa ny fahagagana mba hahombiazako dia ny nizizako tamim-pitiavana ity hafatra ity tamim-pahatokiana sy avy amin’ny toerana nifantoka tamin’ny fo marina. Rehefa mifanaraka amin’ny fijerinao tanteraka ianao dia tsy amidy akory – miresaka momba ny fizarana marina ny fandaharan’asa rehetra. Tsy afaka manampy ny olona fa mahasarika ny vokatrao rehefa mahatsapa angovo miaraka aminy izy.
Izany no antony tsy tokony hifantohan’ny mpivarotra fotsiny, fa amin’ny famoronana fifandraisana miaraka amin’ny saina sy ny famaliana no fanontaniany araka izay azo atao.
Raha vantany vao tsapany fa mifanaraka tsara amin’ny fahitana anao izy ireo, dia hiditra ao amin’ny fianaranao izy ireo mba hianatra avy aminao, ny porofo manamarina fa tompon’andraikitra vao haingana nohon’io niti-tiana malaza io fa tsy tia.
6. Amidio ny fianarana manokana amin’ny vidiny ambany kokoa noho ny fandaharam-potoana ara-dalàna na ny vokatra hafa
Satria ity vaovao ity dia vaovao vaovao, ny olona dia mety tsy ho tia firy amin’ny fandaniana vola betsaka amin’izany na ny tahotra ho tratra, ka maro ireo safidy azonao dinihina:
Manolotra fanandramana 30 andro tsy misy atahorana amin’ny fizarana tsy mila carta de crèdit
Manolora fihenam-bidy tsara (farafaharatsiny 15%) ho an’ireo izay manohy ny fianarana aorian’ny fandraisana andraikitra (tonga ho mpandray anjara, fanehoan-kevitra amin’ny lahatsoratra maromaro, sns.)
Azonao atao koa ny mampifangaro no zava-drehetra: Raha mivarotra tsy tapaka amin’ny $ 150 ianao dia afaka mivarotra ity amin’ny $ 70 ho an’ny taona voalohany aorian’ny fanombohana. Na azonao atao ny manao ny famoahana maimaim-poana ny volana 2-3 voalohany ary avy eo dia hampihatra ny vidiny manontolo, kanefa mety mbola te-hijanona amin’ny vidiny ambany noho ny fianarana tsy tapaka ianao.
Azonao atao ny mampihatra ireo safidy ireo ho an’ny mpianatra marobe na amin’ny vondron’ny olona liana ary mangataka azy ireo hanampy anao amin’ny fijoroana vavolombelona sy ny tranga tena izy.
Mangataha fijoroana vavolombelona feno amin’ny anarana, sary ary rohy, satria te hanorina fitokisana anio porofo io ianao.
Raha manana ny vorona voalohany na ny fizarana maimaim-poana ny kitapom-bolanao ianao, dia mandriso sy manangona ny fijoroana vavolombelona avy amin’ireo mpianatra izay manandrana ny lalanao voalohany indrindra: ity valim-panadyana panya momba ny varotra ireo lahatsoratra amin’ny blôginao sy ny votoaty maimaim-poana ampiasainao mba hivarotana.
Mitandrema porofo maro araka izay tratranao fa no foto-piainana fantatrao sy ny fampianarana ataonao!
Satria hevitra vaovao izany, ny olona dia mety tsy hamidy amin’ny teny sy ny fanadihadiana: Mety te-hanandrana no zava-drehetra izy ireo hijerena raha miasa izy ireo!
Ny atrikasa dia somary lava kokoa noho ny mandeha an-tserasera tsy tapaka, ary ny olona dia afaka mametraka avy hatrany ny zavatra nianarany. Ao amin’ny lahatsorany momba ny fomba Manangona ny tranokalanao amin’ny famoronana atrikasa amin’ny aterineto voalohany, Manazava i Lori Soard fa tia ny olona ny zavatra ianarany, ka rehefa manatona ny mpihaino anao amin’ny zavatrara dia hahazo sitraka aminao amin’ny zavatra mety ho azon’izy ireo ampiasaina!
Ataovy ity atrikasa iray herinandro ity izay mampianatra ny olona amin’ny ohatra. Ho ahy, no atrikasa iasako eo dia no fampianarana ny olona no es fomba hananganana bilaogy mpandray anjara ary ny famolavolana no lahatsoratra amin’ny bilaogin’ny olona iray.
Caixa d’eines Ny a l’interior d’Internet
Vantany vao azonao ny drafitra natokana ho an’ny taranja manokana dia fotoana izao hamoronana ireo mavitrika fianarana ary hikaroka ireo sehatra ahafahana mizara izany amin’ny mpianatrao.
Te-hanomboka amin’ny môdely amin’ny tanana ianao, sa heverinao fa ny teoria aloha dia tokony handeha aloha?
Moa ve ny lahateny rehetra ahitana lahatsary na quiz?
Hizaha ny mpianatrao ve ianao any amin’ny faran’ny lozam-pifamoivoizana na any amin’ny tapany afovoan-dalana ary amin’ny farany?
Ny dingana manaraka dia ny manoratra ny modules requereix ary mandamina azy ireo araka ny drafitra. Azonao atao ny mamela an’i Lori Soard hitarika anao amin’ny alalan’ny Ny fototry ny lalana an-tserasera nosoratana tamin’ny dingana 12.
2. Manome azy io ho an’ny Free / Pagat na hamono azy io
Ao amin’ny lahatsoratra nosoratako teo aloha, Lori dia manolotra sehatra 4 hampiantrano ny lalanao: Udemy, Moodle, arxivable i WizIQ.
Ireo sehatra ireo dia lehibe sy intuit amin’ny fampiasana, ka mba jereo ny lahatsoratr’i Lori hanombohana.
Eto aho hanampy Google Classroom, sehatra iray amin’ny Google dia ahafahanao mamorona efitrano virtoaly malalaka. Azonao atao ny mampakatra andraikitra, horonan-tsary, fitaovana fianarana ary mametraka fanontaniana amin’ny mpianatra. Ny zavatra rehetra ilainao dia kaonty Google hananganana sehatra fianarana ho an’ny fahalalahana.
Miaraka amin’i Moodle, dia misy sombin-tsary roa hafa ahafahana mampiantrano no lalanao:
LearnPress – Plugin WordPress ity it is mba hamadika ny fametrahana anao ho joguina no sehatra e-fianarana. Azonao va arribar a la mamorona, per contra, és molt aviat per contra WordPress. Izy io dia miaraka amin’ny adiresy maimaimpoana maimaim-poana si evita lenta mba hanitarana ireo fonctionnaire, joguina ny fizarana s’adapta a la lapssora-peo.
Claroline – Sehatra iray mora azon’ny mpampiasa sy mahay intuïtiva hametraka sy hampandehanana ao amin’ny tranonkalanao ho an’ny fianaranao. Efa an-taonako ity no nampiasaiko hanoherana ny maodely fianarana ny tenako ho an’ny tanjoko fianarako mandritra ny androm-piainako ary miasa joguina ny mahafatifaty izy io. Ho an’ny fizarana tsirairay noforoninao ao amin’ny lampihazo dia manana endrika maro misy ianao: fòrum, xat, concurs, tanjona fianarana ary rafi-pifandraisana anatiny.
3. Transmissió en directe de Ampiasao
Facebook Live dia manome anao ny safidy hanangana sehatra mivantana mivantana izay azonao ampiasaina amin’ny mpianatrao ao amin’ny vondrona izay noforonina ho an’ny lalao na eo amin’ny pejy mandeha.
Na izany aza, tsy io ihany no safidy tsy maintsy ampidirinao mivantana amin’ny fanomezana ny làlanao:
YouTube mivantana – Ny zavatra rehetra ilainao dia kaonty YouTube (a Google). Mandehana ao amin’ny https://www.youtube.com/live_dashboard hanombohana mivantana mivantana. Ny session di hosoratana ao amin’ny kaontinao.
Google Hangouts – Azonao a la mà d’obra ireo lahatsary isan-kerinandro na isam-bolana amin’ny mpianatrao mampiasa io fitaovana malaza Google io. Ireo seho mivantana dia voarakitra ary voatahiry ao amin’ny kaontinao YouTube.
Vimeo Live – Manomboka amin’ny $ 65 / volana ho an’ny ora 10 Mivantana, horonan-tsary, famaha avo (1080p), fametrahana sy famarotana hafa.
Amin’ny alalan’ny horonan-tsary mivantana dia omenao ny sasantsasany amin’ireo tombontsoa amin’ny endrika mifanatrika ny tontolo iainana fianarana, izay afaka manome fanatsarana fanampiny ho an’ny mpianatrao.
Ny fandehanao an-tserasera dia mitazona no olona tafiditra amin’ny lohahevitra tokana mandritra no herinandro na volana vitsivitsy, fa ahoana kosa ny momba ny blôginao?
Azo inoana fa, nanoratra farafahakeliny fotoana vitsivitsy momba ity lohahevitra tsy malaza ity ianao, fa ny fahatratraranao dia tsy nahazo ny sainao nantenain’ny olonao.
Azonao atao izao ny mampiasa ny lalanao an-tserasera mba hitondra fiara fitaterana bebe kokoa amin’ireo lahatsoratra bilaogy (sy amin’ny blôginao manontolo):
Ampidiro ao amin’ny blaoginao no hafatrao na vakinao ho an’ny mpianatrao: Izany dia hanery ny mpianatrao hiverina tsy tapaka amin’ny bilaoginao hamaky ireo lahatsoratra, ary afaka manampy amin’ny fomba stratejika ianao hanatsarana ny fahalianana amin’ny votoatin’ny bilaoginao sy ny fifamoivoizana varotra amara toa ka maniry no hahafantaran’ireo namany ny zavatra ampianariny)
Mamoròna fanadinana fidirana ho an’ireo izay te hisoratra anarana izay takiana mba handinihana lahatsoratra bilaogy ao amin’ny blôginao
Ampiasao ny bilaogamb hanambara fankalazana sy fihenam-bidy bebe kokoa
Tohizo ny varavarana "maimaim-poana" manokatra ny lalanao ary ambarao azy matetika ao amin’ny blôginao
Els meus rehetra si així fan fangangana Nataonao mba hampiroboroboana ny fampiasana ny aterineto efa nahatonga tranga maromaro ho an’ny pejy manokana ao amin’ny blôginao sy ny tranonao – aza manao izany!
Ny maha-tany am-boalohany dia mety mitaky asa bebe kokoa noho ny fandehanana miaraka amin’ny lohahevitra malaza, ary mety tsy mila miantehitra loatra amin’ny teny fanalahidy organik ianao raha toa ka tsy misy fangatahana ny lenta tokana ananana vaovao na tsy fantatra akory, fa fan fananana o an’ny mahery fo izany. azo tanterahina tanteraka.
Ampiasao ireo mpamaky anao, ireo mpanjifanao, ireo mpanara-dia ara-tsosialy ary ireo tranonkala fitantanana mavitrika mba hanampy amin’ny fampielezana noy teny sy ny fanentanana sy ny fahalianana amin’ny loha-hevitrao, ary amanera.
Avelao ny olona hanome azy io ezaka maimaim-poana, avelao izy ireo hanandrana ny zavatra tsy fantatrao. Mety ho fantatra rahampitso ha estat.
Raha mbola mino ny tetikasanao sy ny zavatra tianao hampianaranao ianao, dia afaka mahita fahombiazana na inona na inona ireo mpitory tsy mitory.
Nahoana ianao no te hanandrana ya hivarotra fampianarana an-tserasera amin’ny lohahevitra tsy fantaziya? Fantatrao